किन हेग जाने हामी ?, क्रान्ति गरे पावत कोही हेग गएको छ ? : बाबुराम भट्टराई - Rastrakokhabar
किन हेग जाने हामी ?, क्रान्ति गरे पावत कोही हेग गएको छ ? : बाबुराम भट्टराई
१ फाल्गुन २०७७, शनिबार १८:०७
काठमाडौं, १ फागुन । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा साझा सहमति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सत्य निरुपण र वेपत्ता आयोग ब्लाकमेलिङ गर्ने साधन बन्न नहुने उनले बताएका छन ।
शनिबार आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘गुमनाम आमाहरू’ को लोकार्पण कार्यक्रममा भट्टराईले आयोग बनेपछि कतिपय मानिसहरुले हेग जानुपर्छ भन्ने थालेको सुनाए । उनले अघि भने, किन हेग जाने हामी ? यो महान क्रान्ति थियो, क्रान्ति गरे पावत कोही हेग गएको छ ?’
शान्ति सम्झौता र संविधानको अभिन्न अंग भएको भन्दै यसले खेलवाडको विषय बनाउन नहुने बताएका छन ।
आफूहरुले माओवादी आन्दोलन नभई तत्कालीन माओवादी पार्टीमात्र छाडेको भन्दै उनले जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायतबारे साझा बुझाइ हुनुपर्ने बताएका छन ।
Previous Post	बाबुरामजी एउटै पार्टीमा नरहे पनि राजनीतिक मुद्दा र एजेण्डामा हामि एकै ठाउँमा छौँ : प्रचण्ड